Joe Biden, Qaxootiga waxaan sanad kasta qaadanynaa dad gaadhaya 150,000 oo qof -
Joe Biden, Qaxootiga waxaan sanad kasta qaadanynaa dad gaadhaya 150,000 oo qof
Wadanka Mareykanay ayaa dhawaan ka dhacday doorashada Madaxweyaha wadankaas, Madaxweynaha hada wakhtigiisu gabaabsiga yahay ee Donald Trump ayaa wadankas intii. uu talada hayey ku sameeye isbadelo badan xaga waaxda socdaalk iyo jinsiyadaha ee Mareykanka taasi waxay keentay in Wadamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto dakeeda la saaro xanibad ah in aanay muwadiniinta Soomaaliya u dhashay aan iman karin Wadanka Mareykanka.
Hadaba Madaxweynaha cusub ee la doorat Joe Biden ayaa sheegay marka uu xafiiska la wareego oo ah January20, 2021 uu waxbadn ka badeli doona arimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadah ee Mareykanka. Wuxuu sheegey halka tirada qaxootiga wadanka Mareykanka uu qaato sanadkii ay. tahay 15,000 oo kaliya, lakiin uu isagu tiradaas ka dhigidoono 150,000 oo qaxooti ah oo laga soo qaadinoono wadmada aduunka oo dhan kuwooga qaxootiga ah ee dagaaladu aafeeyeen.
Wuxuu kale sheegey Madaxweynaha cusub ee ladoortay in uu 11 miilion oo Wadanka Mareykan degen oo hadana ah bilaa sharci in lasiindoono sharciyada dadkaas bilaa sharciga ah, intaas waxaa sii dheer in uu sidoo kale ka qaadinoono xanibaada uu Donald Trump saaray wadamo ay ku jirto xanibaad xaga socdaal ka oo aanay dadkoogu iman karin wadanka Mareykanka.
Madaxweynaha cusub ee ladoortay Joe Biden ayaa sheegay in uu meesha ka saaridoono dadka la tarxiilo (deportation) ka lagu sameeyo.
Author Mohamed OmarPosted on November 29, 2020 Categories News
4 thoughts on “Joe Biden, Qaxootiga waxaan sanad kasta qaadanynaa dad gaadhaya 150,000 oo qof”
ASC waan ku salaamay waxa aan kamid ahay daawadayaasha channel Kan waxa aad noo sharaxdaa qaxoontiga maraykanka iyo noocyaduu ukala baxo iyo interketka malaga buuxsankaraa
insha Allah, waxaan ka soodiyaarindoona barnaamijyo kale oo ku saabsan qaxootiga mareykanka. hada waxaa lagu jiraa wakhtiga Dawlada cusub ay la wareegi laheyd xafiiska markaas kadib ayaa la guda galayaa hawlahaas mareykan ka waa marka uu Joe Biden xukunka la wareego.
Farax sulub cabdi says:
Waan soo dhawaynaynaa madaxwaynaha cusub
Sultan Ibrahim Hassan says:
M.a waa farxad runtii
Previous Previous post: Coronavirus Recession / Dhaqaalaha Aduunka hoose udhac weyn kuyimid
Next Next post: Sideed uga faa’iidaysan kartaa isbedelka lagu sameenayo US-Immigration?
Barnamijka shaqooyinka ee lagu yimaado Canada (Express Entry) NOC oo lagu badaly TIER
Barnaamijyada lagu yimaado Wadanka Kanada
Fadlan foomka hoose buuxi hadii aad rabtid in lagu buuxiyo visa lottery ga wadanka mareykanka yaan laga buuxin.
Buuxi foomka qiimeynta fill the evaluation form
Sideed uga faa’iidaysan kartaa isbedelka lagu sameenayo US-Immigration?
Khalid hussein osman on Fadlan foomka hoose buuxi hadi…
Sharmake on Buuxi foomka qiimeynta fill th…
Hindi ahmed on Fadlan foomka hoose buuxi hadi…
Maxamed Axmed on Fadlan foomka hoose buuxi hadi…
Hassan on Buuxi foomka qiimeynta fill th…